Ukhozi FM – The Ulwazi Programme
UBafana Phillip Zwane
UBafana Phillip Zwane wazalwa ngo-1928, e-Ashburton, wajoyina Umsakazo wesiZulu (Ukhozi FM) (njengoba wawaziwa kanjalo kudala) ngo-1960. UZwane ube ngowokuqala abamnyama, onguMzulu ukuba umsakazi wezemidlalo ukusakaza imicimbi efana ne-JulY Handicap, Gold Cup, Metropolitan Boxing, Comrades Marathon ne-Rapport Cycle Tour. Usebenzise imoto yesiteshi ukusakaza, njengoba bezinganele izinsiza zokuthola isitudiyo esifanele. Yize esethathe umhlalaphansi kusukela ngo-1991, waze washona … Read more
Categories People Tags Bafana Phillip Zwane, Ukhozi FM
UDudu Khoza owaziwa kakhulu ngelika-Lady D onemiklomelo yezindondo yokuba ngumethuli wezinhlelo waseNingizimu Afrika. Wazalelwa e-Marianhill Mission, ngase-Pinetown, wakhulela elokishini laseMlazi wenza umatikuletsheni Ohlange High School. Ngemuva kwesikole samabanga aphezulu waqhubeka nokwenza izifundo zobunesi futhi wathola idiploma kwi-General Nursing, Midwifery nase-Community Health Nursing. Ngaphansi kwegama elithi “Sister Midred” wafinyelela kumalungu omphakathi ngezinsika zamaphephabhuku, izindatshana zamaphephandaba kanye … Read more
UWelcome Bhodloza Nzimande
UWelcome Nzimande (odume ngelikaBhodloza) wazalwa ngonyaka we-1947 ePhatheni Reserve e-Richmond esifundazweni saKwaZulu Natali. UNzimande unesitifiketi se-Higher Primary Teacher’s Certificate (HPTC) asithola e-Indaleni Training College (1970). Ngo-1995 uNzimande wathola iziqu ze- B. Admin e-University of Zululand, eMlazi Campus. Ngemuva kwalokho wafundela ukuphathwa nobuholi e-Graduate School of Business (UDW) nase-Gordon Institute of Business Science e-University of Pretoria. … Read more
Categories People Tags Ukhozi FM, Welcome Bhodloza Nzimande